Play Store မှ "System Update" အက်ပလီကေးရှင်းကို Google ဖယ်ရှား Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | လုံခွုံရေး
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ Google application store Play Store ကို ၎င်းသည် Android စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်အလုံခြုံဆုံးနေရာဖြစ်လာသည်။ အသုံးပြုသူများသည်အမှန်တကယ်ပြောဆိုနေသည့်အရာမဟုတ်သည့်အရာတစ်ခုကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကား, ယခုတိုင်အောင်, တိကျတဲ့ app ကိုအတူနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ဂူးဂဲလ်ကဖယ်ရှားလိုက်သည် Play Store ကို သူ့ဟာသူဟုခေါ်သည့် application တစ်ခု "စနစ်အသစ်ပြောင်းခြင်း" တရားဝင်နှင့်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုတုပခြင်း၊ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်တွင်အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာမှဒေါင်းလုပ်ရယူခဲ့သော spyware ဖြစ်သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်း။
ဤလိမ်လည်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကိုလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Zscaler, ထိုအထင်မြင်မှားစေသောလျှောက်လွှာ "System Update" ကိုသူလျှိုဖြစ်သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည် ဖုန်း၏တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို၎င်းနောက်ကွယ်မှမည်သူထံသို့ပေးပို့သည်။ ဤအချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းအပြင် "စနစ်အသစ်ပြောင်းခြင်း" လက်ခံရရှိသော SMS စာတိုများကိုလည်းဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသည် အသုံးပြုသူက။
Zscaler ၏အဆိုအရအသုံးပြုသူသည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်ပြီးနောက်သူသည်၎င်းကိုသုံးရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ကြောင်း ("ကံမကောင်းစွာ Update Update service သည်ရပ်လိုက်ပြီ") ကိုပြသသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပေါ်လာသည်။ နောက်ခံအတွက်ပြေးနေခဲ့တယ်.
Zscaler သည် Google သို့အချက်ပေးသံထွက်လာပြီးကုမ္ပဏီသည်၎င်းကို Play Store မှဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်အက်ပလီကေးရှင်းဖိုင်တွင်ဖတ်ပြီးသည့်အတိုင်းမှားသည် "System Update" ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီအကြိမ်တစ်သန်းမှငါးသန်းအကြားကူးယူပြီးဖြစ်သည်.
၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှပင်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သောအခါသတိထားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အက်ပလီကေးရှင်းအတုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်လက္ခဏာများမှာအသုံးပြုသူများအကဲဖြတ်ချက်များသည်အလွန်ဆိုးကျိုးများရှိသည်ဆိုသည့်အချက်အပြင်ပန်းပုထုထည်ဖော်ပြချက်ကိုဖော်ပြခြင်းမပြုခြင်း၊ ယင်း၏လည်ပတ်မှုဖန်သားပြင်များမဟုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အဲဒါအလုပ်လုပ်တယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Play Store မှ "System Update" အက်ပလီကေးရှင်းကို Google ဖယ်ရှား
အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်မှုများစွာရှိသော်လည်းသင်၏စတိုးဆိုင်မှဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရန်သုံးနှစ်ကြာသည်။ ဂူးဂဲလ်၏ကိုယ်ပိုင်ကားများစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်။ သူတို့၏လူများမှလူများကိုသတ်ရန်ရွေးစရာကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကဝင်ငွေရရှိရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်မှားမဟုတ်။